ट्राफिक नियम मिच्नु भयो ? अब ट्राफिकले घरमै चिठी पठाउछ « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
ट्राफिक नियम मिच्नु भयो ? अब ट्राफिकले घरमै चिठी पठाउछ
२ फाल्गुन २०७४, बुधबार १५:१०
महाशाखाका सहप्रवक्ता मुकुन्द मरासिनी चालकले जथाभावी ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेपछि महाशाखाले चालकको घरमा नै चिठी पठाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउछन् । “सबै ठाँउमा ट्राफिक पुग्न सक्दैन, जथाभावी ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेपछि दुर्घटना धेरै हुने भएकाले हामीले कारबाहीलाई तीव्रता दिएका हौँ,” – उनले भने ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वीरेन्द्रबहादुर स्वाँर काठमाडौँ उपत्यकामा ११ लाख र देशभर २८ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको बताउछन। “साँघुरो सडक र धेरै सवारी साधनका कारण उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ,”– उनि भन्छन।
प्रकाशित : २ फाल्गुन २०७४, बुधबार १५:१०